fonosana iray fonosana ho an'ny mpanamboatra tariby sy tariby - mpiorina fonosana ho an'ny tariby sy tariby mpamatsy ary orinasa i China
UL90 ℃ PVC Stabilizers ho an'ny tariby mitafo tariby tariby herinaratra tariby mitondra tariby
Aimsea dia namolavola, manamboatra ary mivarotra solid, stabiliserie Calcium Zinc (CaZn) avo lenta natao hihaona amin'ny fangatahana takiana amin'ny sheathing avo lenta sy ny insulation ho an'ny indostrian'ny tariby. CaZn dia isan-karazany ny stabilizers fanodinana mahomby izay manatsara ny fahombiazan'ny fantsom-pifandraisana vita amin'ny PVC, manome fitoniana hafanana sy fananana elektrika, fitoniana miloko sy loko voalohany, mety amin'ny mavo sy kalsioma mavesatra, tariby fotsy ary tariby, tsara fahamendrehana mafana, mety amin'ny palitao tariby herinaratra.
UL80 ℃ PVC Stabilizers malefaka PVC tariby miorina amin'ny tariby coaxial voafintina tariby miforitra
Ny stabilizers PVC anay be mpampiasa amin'ny tariby Twisted pair dia matetika ampiasaina amin'ny fifandraisana an-tariby sy ny tambajotra Ethernet maoderina. Izy io dia karazan-tariby iray izay misy conducteur roa amin'ny boribory tokana miforitra. Ny tariby roa dia mamorona tariby afaka mandefa data. Ary ny tsiroaroa dia ahodinkodina mba hiarovana amin'ny crosstalk, ny tabataba vokarin'ny tsiroaroa mifanila aminy. Ny tariby coaxial, na tariby coax, dia natao handefasana ireo famantarana matetika. Ny tombony dia i Kongo mena noho ny tariby sy tariby maizina, mety ho an'ny formula kalsioma maivana, mety amin'ny palitao vovoka ary azo antoka tsara.
UL105 ℃ PVC stabilizer ho an'ny tariby fifandraisan-davitra fametrahana tariby
Ny rafitra Stabilizer dia misy fiantraikany lehibe amin'ny fahombiazan'ny fiainana sy ny serivisy amin'ny tariby PVC. Izy io dia ahafahana manamboatra tariby sy tariby mahomby, tariby ambanin'ny tany, tariby fametrahana, tariby fifandraisan-davitra ary manome toetra manokana an'ireo vokatra vita - ao anatin'izany ny fitoniana hafanana sy ny toetran'ny herinaratra, ny fitombon'ny loko sy ny loko eo am-boalohany, mety amin'ny mavo sy kalsioma mavesatra, tariby fotsy ary tariby, fahamarinan-toerana tena tsara, mety amin'ny palitao tariby herinaratra.
Calcium Zinc Stabilizer ho an'ny tariby 5G fifandraisan-davitra tariby tariby elektrika
Matetika ny PVC dia ampiasaina amin'ny palitao tariby elektrika 5G noho ny toetrany miaro tena tsara ary ny diélectrique tsy miova. Ny PVC dia matetika ampiasaina amin'ny tariby malefaka ambany (hatramin'ny 10 KV), tsipika fifandraisan-davitra ary tariby elektrika. Ny rafitra stabilizer dia misy fiatraikany lehibe amin'ny fahombiazan'ny fiainana sy ny serivisy amin'ny tariby PVC. Afaka manamboatra tariby sy tariby mahomby izy io, ary manome ny vokatra vita voafaritra manokana - ao anatin'izany ny fitoniana tsara sy ny toetran'ny herinaratra, ny lokon'ny lokony sy ny loko, ny toetran'ny mekanika, ny fanaparitahana stabilizer. Ny stabilizer Ca / Zn dia ampiana amin'ny fantsom-pifandraisana & tariby ary fitambarana palitao mba hampitomboana ny fahafaha-misaina ary hampihena ny fahamendrehana. Zava-dehibe ny fananana stabilizer ampiasaina mifanentana avo amin'ny PVC, ny fihenan'ny vidiny, ny fananana fahanterana tsara ary tsy misy electrolyte. Ankoatra ireo fepetra takiana ireo, ny plastika dia voafantina miaraka amin'ny fitakiana ny vokatra vita ao an-tsaina.
Pvc Heat Stabilizer ho an'ny Flexbile, Pvc Additives, Pvc One Pack Stabilizer, Pvc Stabilizer, Stabilizer tsy misy poizina Pvc, Pvc Heat Stabilizer,